नेपाल– अष्ट्रेलिया व्यापारमा जोड « Drishti News – Nepalese News Portal
नेपाल– अष्ट्रेलिया व्यापारमा जोड
३० मंसिर २०७७, मंगलबार 8:12 am
– शंकरमान सिंह
विश्व, कोभिड–१९ को महामारीको सामना गर्दैछ र यसको प्रभावहरु विश्व अर्थतन्त्रमा विस्तारै देखिन थालेको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले विकास दर दुई प्रतिशतभन्दा कम हुने आकलन गरेकाले नेपालले अझै सफल हुन धेरै काम गर्न बाँकी छ । नेपाल र अष्ट्रेलिया बीचको सम्बन्ध र विचारको आदानप्रदानले नेपालमा एफडिआइ आकर्षित गर्ने वातावरणलाई अनुकूल बनाउनेछ ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि अष्ट्रेलिया र नेपालवीच व्यापार प्रवद्र्धन, लगानी तथा साझेदारी सम्बन्धमा नेपाल–अष्ट्रेलिया लगानी सम्पन्न गरिएको छ । अष्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासको आयोजनामा अनलाइनमार्फत लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरिएको हो । जसमा महावाणिज्यदूतहरुले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा नेता भीम रावल, नेपाल सरकारका सचिवद्वय चन्द्रकुमार घिमिरे, डा. बैकुण्ठ अर्याल, लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, कृषिविज्ञ डा. किशोर दहाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहित अष्ट्रेलियन राजनीतिक दलका नेता तथा अष्ट्रेलियाका व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसले अष्ट्रेलियाका लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।
अष्ट्रेलियासँग नेपालको व्यापार धेरै ठूलो छैन तर विस्तारै बढ्दैछ । सन् २०१९ मा अष्ट्रेलियामा नेपालको निर्यात करिब रु ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ र आयात रु ८०६६ मिलियन बराबर रहेको थियो । अष्ट्रेलियामा नेपालको निर्यातको चलन र अष्ट्रेलियाबाट नेपालको आयातको चलनले दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापारको मध्यम तहको संकेत दिन्छ । नेपाल अस्ट्रेलियासँग निरन्तर व्यापारको अन्तरको सामना गरिरहेको छ । तसर्थ, उत्पादन विकास, उत्पादन अनुकूलन र अस्ट्रेलियाको बजारमा नेपाली उत्पादनलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउने मार्फत या त वाणिज्य बीचको अन्तरलाई कम गर्ने आवश्यकता छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन पनि नेपाल–अष्ट्रेलियाबीच द्विपक्षीय सहयोग आवश्यक छ । सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रको ध्यान अब वैदेशिक पूँजी भित्र्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड नेपाल (आइबीएन) ले जलविद्युत्, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, टेक्नोलोजीमा प्रोजेक्ट्स अफ रोस्टर तयार गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गरिनु हुन्न । नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष भयो । यसबीच हामीलाई राम्रो समय र खराब समय एकसाथ सामाना गर्ने अवसर दिलायो । अष्ट्रेलियाली सहायताले नेपाललाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अग्रगामी देशको रूपमा विश्वस्तरमा नेतृत्व गर्न सहयोग पुर्यायो ।
कोभिड–१९ युगको सन्दर्भमा नेपालले लामो समयदेखि नै कूटनीतिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यद्यपि, अनुदान, ऋण वा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआइ) आन्तरिक विकासको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नका लागि प्रमुख शक्तिहरूको बीचमा कम्तीमा असल कूटनीतिक चुनौतीहरु विद्यमान छन् । तर कोभिड–१९ पछि देशले अझ कठिन विदेश नीति वातावरणको सामना गर्नेछ । विगतमा जस्तै नेपालले पनि दुई ठूला छिमेकीहरू भारत र चीनसँग सम्झौताको सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ ।
छिमेकीहरूको द्रुत आर्थिक विकाससँगै नेपाल अहिले दुई अर्बभन्दा बढी उपभोक्ताको बजारको केन्द्रमा छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति उचाइ ५०० मिटर देखि ८८४८.८६ मिटरसम्म छ । नेपालमा स्थलाकृतिहरूको एक धेरै विविधता छ जुन एकै साथ मौसम र मौसमको विविधतामा प्रतिबिम्बित हुन्छ । विश्वको २.२७ ५ जलस्रोतसहित असख्य नदीहरू छन् । जसको लम्बाइ ४५ हजार किलोमिटर छ । नेपाल आन्तरिक जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश हो । नेपाललाई विकसित देशहरूको समूहमा राख्ने सम्भाव्य प्राकृतिक स्रोत रहेको छ । यो कुरा अष्ट्रेलियाका लगानीकर्ताहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।
नेपाललाई लगानीमैत्री बनाउन नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी ऐक्ट २०१७ ल्याएको छ । जसले कम्पनी स्थापना, व्यवस्थापन र प्रशासनिक प्रक्रियालाई अझ सजिलो र पारदर्शी बनाउँछ । यसका साथै कर्पोरेट नाम र ब्रान्डको संरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । एक निजी कम्पनीको अधिकतम १०१ सेयरधनी हुनसक्छ । कुनै सार्वजनिक कम्पनीमा निजी कम्पनीहरूको लागि अनिवार्य रूपान्तरणको आवश्यक पर्दैन (दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाहेक) औद्योगिक इन्टरप्राइज ऐक्ट २०१९ को सम्बन्धमा, यसले प्रदान गर्ने सेवाहरुमाः व्यवसायमा प्रवेश, सञ्चालन र बाहिर निस्कनको लागि सरलीकृत र स्पष्ट प्रक्रियाहरू, वन स्टप सेवा केन्द्र (कस्टम, कर, जग्गा, आप्रवासन, र नेपाल राष्ट्र बैंक) कुनै राष्ट्रियकरण नहुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । श्रम ऐनको सम्बन्धमा नो वर्क नो पे, विदेशी कामदारलाई काममा लचिलोपन, विदेशी कामदारहरूले आय फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा पनि वैदेशिक लगानीको एउटा पाटो हो । विदेशस्थित नेपालको कूटनीतिज्ञहरुले यस्ता कुरा त्यहाँका लगानीकर्ताहरुबीच अन्तक्र्रियामार्फत बुझाउन सक्नुपर्छ । ऐन, कानून नबुझेर पनि कतिपय लगानी नआएको हुनसक्छ ।
एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नीतिमा प्याटेन्ट, ट्रेड मार्क, प्रतिलिपि अधिकार, र वीपो मानक अनुसार अन्य आईपी । विदेशी लगानी र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर ऐन २०१९ मा विदेशी मुद्रामा सेयरमा लगानी, लाभांश र नाफाको पुनः लगानी, एयरलाइन्स, जहाज, मेसिनरी र उपकरणको भाडामा लगानी, ‘भेन्चर क्यापिटल फन्डहरू’ मार्फत इक्विटीमा लगानी गर्ने प्रावधान समावेश छ । कर्पोरेट विदेशी लगानीकर्ता दोस्रो सेयर बजारमा लगानी सरकारबाट अर्को सूचना नभएसम्म प्रभावकारी हुँदैन, सेयर वा सम्पत्तिको खरीद मार्फत लगानी, विदेशी शेयर बजारमा धितोको लगानी सरकारबाट अर्को सूचना नभएसम्म प्रभावकारी हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ताहरूले व्यक्तिगत लगानी गर्न सक्छन् वा अर्को विदेशी वा नेपाली व्यक्ति र संस्था संग संयुक्त लगानी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि लगानीकर्ताहरुका लागि राम्रो सूचना हो ।
नेपालको प्रमुख आयातहरूमा धातु, पेय पदार्थ र खाद्यान्न समावेश छ । अष्ट्रेलियाको वाइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दो लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ र धेरै अष्ट्रेलिया वाइन काठमाडौंमा उपलब्ध छन् । अष्ट्रेलियामा नेपालको प्रमुख निर्यातहरू हस्तकला, रेडिमेड गार्मेन्ट्स, हस्तशिल्प (चाँदीको गहना, चिया, पश्मिना च्याङ्ग्रा पश्मिना) इत्यादि हुन् । नेपालले चिया, ओर्थोडक्स र सीटीसी दुवैलाई महत्वपूर्ण मात्रामा एनटीएफपी, मह र चिया निर्यात गर्न सक्ने पार्यता सम्भावना रहेको छ ।
केही संयुक्त उद्यमहरू पर्यटन, उड्डयन, र मोटरसाइकल जस्ता मेसिनरीको क्षेत्रमा पनि आउँदैछन् । अस्ट्रेलियाका कृषि र कृषि उद्योगमा नेपालमा एफडीआई आकर्षित गर्ने धेरै अवसर छ । त्यसकारण हामी अष्ट्रेलियाली व्यापार समुदायलाई भेट्न र नेपाली समकक्षीहरूसँग अन्तक्र्रिया हुनु जरुरी छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै बैदेशिक लगानी भारतबाट आउँछ । त्यसपछि चीन, अष्ट्रेलिया र आयरल्यान्ड छन् ।
अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दो छ । अष्ट्रेलियाली शिक्षा प्रणालीको अन्य अधिक परम्परागत शिक्षा प्रदायकहरु भन्दा धेरै फाइदाहरु छन् । उदाहरणका लागि, यसले तुलनात्मकरूपमा कम लागतमा उच्च गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्दछ । अष्ट्रेलिया एक सफल बहुसांस्कृतिक समाज हो र केही विभिन्न देशहरूका विद्यार्थीहरूको लागि सजिलो र स्वागत वातावरण प्रदान गर्न सक्छ ।